အလုပ်မထွက်ခင် တစ်ရက်အလိုမှာ စပိုက်ဒါမန်းလို ဝတ်ပြီး ရုံးလာတက်တဲ့ အမျိုးသား - Shwe Khit Online TV
HomeFunအလုပ်မထွက်ခင် တစ်ရက်အလိုမှာ စပိုက်ဒါမန်းလို ဝတ်ပြီး ရုံးလာတက်တဲ့ အမျိုးသား
October 19, 2021 Yan Fun 0
အခုတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်ကြီးကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ် ။ ဒါကတော့ အလုပ်မထွက်ခင် တစ်ရက်အလိုမှာ စပိုက်ဒါမန်းလို ဝတ်ပြီး ရုံးလာတက်တဲ့ အမျိုးသား အကြောင်းပါ ။ ဘာကြောင့် သူ ဒီလိုမျိူး ဝတ်ပြီး လာလဲဆိုတာကိုတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
ဘရာဇီးနိုင်ငံ ဆော်ပိုလို မြို့က ဘဏ်တစ်ခုမှာ လုပ်နေတဲ့ အမျိုးသား တစ်ဦးဟာ အလုပ်မထွက်ခင် တစ်ရက်အလိုမှာ စပိုက်ဒါမန်းလို ဝတ်ပြီး ရုံးလာတက်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း သူဟာ ရုံးအတွင်းပိုင်းက ခုံမှာ သာ ထိုင်ပြီး ကွန်ပျူတာ နဲ့ပဲ အလုပ် လုပ်နေကာ Customers တွေနဲ့ ထိတွေ့ရမယ့် အရှေ့စားပွဲခုံကို မသွားခဲ့ပါဘူး ။ အကြောင်းကတော့ သူ့ရဲ့ cosplay ဝတ်စုံကြောင့် customers တွေရဲ့ စိတ်အနှောင့်ယှက် ဖြစ်မှာမျိုး မလိုချင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အမျိုးသားရဲ့ ပြောပြချက်အရ ဘဏ်ကနေ ထွက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ တစ်နေ့မှာ သူ့အလုပ်စားပွဲပေါ်က ကွန်ပျူတာနဲ့ အလုပ်လုပ်နေရင်း ဒီအလုပ်ကြီးကို စိတ်ပျက်လာလို့ ထွက်တာပါလို့ ဖြေကြားထားပါတယ် ။ အမျိုးသားရဲ့ ပုံစံကိုတော့ စပိုက်ဒါမန်း မျက်နှာဖုံး ဝတ်ထားတာမို့လို့ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ဖြစ်မှန်းကိုAWMH မသိခဲ့ကြပါဘူး ။ ထိူ အမျိုးသားဟာ သူ့ရဲ့ အလုပ်နေရာ ကို အသစ်ဝင်လာတဲ့သူ အတွက် လုပ်ငန်းခွင် နည်းလမ်းများကို ရှင်းပြခဲ့သလို အလုပ်ဆင်းချိန်မှာလည်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တစ်ဦးချင်းကို နှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပါသေးတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
လူတော်တော်များများဟာ အလုပ်ကနေ ထွက်တဲ့အခါ ဒီ အမျိုးသားလိုမျိုး ထူးထူးခြားခြား စိတ်ကူးနဲ့ ပုံစံ ဖန်တီးပြီး အလုပ်ထွက်တာကတော့ ရှားတယ်ပဲ ပြောရမှာပါ ။ အခုလိုမျိုး စပိုက်ဒါမန်း ဝတ်စုံ အလုပ် နောက်ဆုံးရက်မှာ ရုံးလာတက်တဲ့ အမျိုးသား အကြောင်းဟာ လူမှု ကွန်ယက်တွေပေါ်မှာ အတော်လေးကို နာမည်ကြီးသွားခဲ့ပါသေးတယ် ။ Social Media အသုံးပြုသူ တစ်ချို့ကတော့ သူတို့ အလုပ်ထွက်တုန်းကတော့ ဒီ အမျိုးသားလို ထူးထူးဆန်းဆန်း လုပ်ပြခဲ့ဖို့ ကြောက်နေခဲ့တယ်လို့ ဝန်ခံထားကြပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ အလုပ်မထွက်ခင် တစ်ရက်အလိုမှာ စပိုက်ဒါမန်းလို ဝတ်ပြီး ရုံးလာတက်တဲ့ အမျိုးသား အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး ထူးထူးဆန်းဆန်း အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com